Makiyi akanakisa muCuba | Kufamba Nhau
Makiyi akanakisa muCuba
Mariela Carril | | Kiyuba, Beaches
Wakaneta nechando here uye unongofunga nezve zhizha? Zhizha rakafanana nemahombekombe uye gungwa uye vanhu vazhinji havagone kufungidzira mwaka wezhizha pasina mazuva mashoma pamhenderekedzo. Europe ine mahombekombe akanaka uye maSpain akanaka, asi hapana chakafanana nenzvimbo dzinopisa dzeCaribbean Sea.
MuCaribbean kune nzvimbo dzakawanda dzinogona kuitika, zviwi zvakawanda zvakakomberedza hupfumi hwazvo kune zvekushanyirwa kwenyika dzese, asi kune imwe chete ine kupihwa kukuru kwenzvimbo dzinopisa, nhoroondo uye hukuru hwetsika nhaka: Cuba. Kubva kudonha kweSoviet Union, chitsuwa ichi chakagamuchira kutashanya uye chine mahotera nenzvimbo dzekutandarira kwese kwese, asi makiyi eCuba ndiyo paradhiso yechokwadi saka nhasi ticha chengeta makiyi akanakisa muCuba kunakidzwa nezhizha.
1 Iwo makiyi eJardines del Rey
Iwo makiyi eJardines del Rey
Makiyi hapana chimwe kunze kwezvitsuwa nezvitsuwa zviri pamhenderekedzo yeAtlantic uye pamhenderekedzo yeCaribbean yeCuba. Pamusoro uye pazasi, kana iwe ukaona mepu. Avo avo ivo vari pamusoro peatlantic ocean Ivo vakabhapatidzwa nemakoloni mukutanga kwezana ramakore regumi nematanhatu vaine zita rekuti Jardines del Rey, mukuremekedza Fernando muKaturike. Fungidzira paradhiso iyo vafambisi vengarava vanofanira kuve vakaona! Ichi chitsuwa ndechimwe chezvina zvakakomberedza chitsuwa chikuru uye chakanyanya kuwanda.
Iwo maKing's Gardens anowanikwa kuchamhembe uye iyo Cayo Coco, Cayo Sabinal, Cayo Santa María, Cayo Romano, Cayo Guajaba uye Cayo Guillermo. Anonyanya kushanya ndiGuillermo, Coco uye Santa María. Aya makiyi, nekuda kwedaro rinovaparadzanisa kubva kuHavana zvakare ndiwo akasarudzika sarudzo.
Cayo Guillermo: ine nharaunda ye13 mativi kilomita uye aripo ina dzese dzinosanganisira resorts. Iyo ine diki nhandare uye zvakare marina uye yakabatana kune hombe chiwi nekukombama pamusoro pegungwa kunoibatanidza iyo nedunhu reCiego de ilavila. Izvi padyo neyechipiri pakukura matombo ekorari munyika, kune epingi flamingos uye ine imwe yemafungidziro akanakisa muCuba, iyo Pilar pamhenderekedzo mukuremekedza chikepe chaHemingway icho chaimbotenderera apa.
Cayo Santa Maria: yakabatanidzwa kuchitsuwa chikuru neiyo imwechete 48-kilometre-refu embankment uye ine mashanu mahotera zvivakwa uye akareba mahombekombe machena anotambanuka kwemakiromita gumi. Inozivikanwa se «Ruva Rachena reMinda yaMambo» uye ndiro rakakura pane rimwe boka rekiyi rakanzi Cayos de la Herradura (Santa María, Las Brujas naEsensenachos) Makumi mana emahotera ndeeSol Meliá uye imwe yacho kuketani yeBarceló. Iko kune mashanu uye mana nyeredzi chikamu.
Cayo Coco: Iyo ine makiromita mazana matatu nemakumi matatu ane makumi matatu epamusoro uye mahotera ese anosanganisira. Inosanganisirwawo nechidzitiro icho chikamu chegungwa chinobatanidza zvakateedzana nemakiyi uye kuti panguva iyoyo chakakurukurwa zvakanyanya nekuda kwekukanganisa kwenzvimbo kwaigona kukonzera. Nzira yakasikwa inoibatanidza ichibva yaenda kuCayo Guillermo, saka vese vanogona kushanyirwa netsoka. Iyo ine nhandare yendege uye kuwedzera kune mahotera nemahombekombe machena kune akawanda maflamingo emusango kufungisisa.
Ndakati pamusoro pazvo Ndidzo sarudzo dzakachipa nekuti havasi kure neHavana uye mapakeji akajairika evashanyi anogara achiisa mazuva mashoma mumuzinda weCuba uye mamwe ese mune imwe yeiyi kiyi. Ndege diki yekubhururuka uye iwe watove mune imwe yeaya maparadhiso. Yakasiyana ndiyo kesi yekiyi inotevera, iyo Cayo Largo del Sur.
Izvi ndezvedu, kiyi yakanakisa yezvose. Nzvimbo yaro yakanakisa sezvo isiri parutivi rweAtlantic asi rinozorora paGungwa reCaribbean, kune mumwe mugumo weCarrereos archipelago. Iine nzvimbo yakatenderedza Makiromita makumi mana nemasere nemakiromita makumi maviri nemana pakureba. Iyo yakakomberedzwa nemakorari matombo anogarwa nemaruva akanaka uye dzakasiyana hove. Iyo ingangoita hombe mahombekombe ari kuyangarara mumvura inodziya uye neturikisi yegungwa.
Izvo zvine International Airport kuti inogona kushanda nendege hombe uye nekudaro inonanga ndege dzinouya kubva kuMontreal, Toronto, Milan kana Frankfurt, semuenzaniso. Kune zvakare nendege mazuva ese kuenda nekubva kuHavana uye vashanyi vepahotera vanogona kuronga mafambiro kuenda kumaguta akakosha kubva munhoroondo uye mutsika maonero senge Santiago de Cuba, Trinidad, Cienfuegos, Varadero kana Pinar del Río. Uye haina kushaya marina saka chero munhu anoshandisa chikepe anokwanisawo kusvika kiyi.
Inayo manomwe mahotera epakati pakati peaviri neane nyeredzi chikamu. Iwo maBarceló, Sol Meliá uye mahotera eGran Caribe: iyo ina-nyeredzi Sol Cayo Largo Hotel, iyo ina-nyeredzi Gran Caribe Playa Blanca, iyo Sol Hotel, iyo South Island, zvichingodaro. Kufamba uchitenderera kiyi kune matekisi uye unogona kurenda mota kana jipi kana kufamba mukati kombi muboka. Iko kune zvakare chitima chidiki inoremedza vashanyi vepahotera uye inovaendesa nekudzoka kubva kumahombekombe eParaíso neSirena.
Mhenderekedzo dzakanakisa muCayo Largo mwanakomana Lindamar, mashanu makiromita machena sefurawa, iri kumaodzanyemba kwekiyi uye padyo padyo nenzvimbo yehotera, iyo mermaid beach, kumadokero, nejecha rayo rinogara riri nyowani kuitira kuti usatsva, iyo Los Cocos pamhenderekedzo, nemiti yayo yakanaka yekokonati inopa mumvuri uye Paradhiso Gungwa, yakanakisa yekuwana zvakavanzika. Aya, pamusoro pekuve ari akanyanya mahombekombe, zvakare ari anowanikwa zvakanyanya. MuCayo Largo kune mamwe mahombekombe asingazivikanwe, mhandara mahombekombe, asi ikoko iwe unotofanira kuroja mota nekuti iyo yekushanya yekufambisa haina kusvika.
Semuyenzaniso? Iyo Tortuga Gungwa, Blanca Gungwa kana Punta Mal Tiempo Gungwa. Uye Los Cocos inogona zvakare kuisanganisira mune ino sarudzo runyorwa Kunyangwe kuchinaya yakawanda pakati paMay naGumiguru nekuti chirimo uye kuchipisa, saka munhu anogona kuchinakidzwa. Iko hakuna kwekufambisa kwegungwa kuCayo LargoMune mamwe mazwi, kana iwe usingade kubhururuka, haugone kusvika kumahombekombe echitsuwa chikuru uye kutora chikepe kubva ipapo. Ndege kana ndege ndiyo nzira yekufambisa uye sezvo chinhambwe kubva kuHavana chiri chikuru, kufamba kwacho kunodhura uye vashanyi vazhinji vanopedzisira vasarudza imwe yekiyi yekutanga yandakakupa zita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Kiyuba » Makiyi akanakisa muCuba
Zvitsuwa zveCambodia nemahombekombe: Kep, Koh Tonsay neSihanoukville
Makina mana Magical Maguta eVeracruz neSonora